Tsy mety ny maka tahaka ny atiny | Martech Zone
Tsy mety ny maka tahaka ny atiny
Alarobia, Jona 8, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Voalohany ny fanilihako: izaho tsy mpisolovava. Satria tsy mpisolovava aho dia hanoratra ity lahatsoratra ity ho hevitra iray. Ao amin'ny LinkedIn, a resaka natomboka tamin'ireto fanontaniana manaraka ireto:
Ara-dalàna ve ny famerenana mandefa lahatsoratra sy atiny hafa hitako fa mampahalala ao amin'ny bilaogiko (mazava ho azy fa manome dera ny tena mpanoratra) sa tokony hiresaka amin'ny mpanoratra aho aloha…
Misy valiny tsotra kely momba an'io saingy maty mafy aho tamin'ny valin'ny valalabemandry tamin'ny resaka. Ny ankamaroan'ny olona dia namaly tamina torohevitra izay, ara-dalàna hamerina mandefa lahatsoratra na votoaty hitany fa misy fampahalalana ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Mamerina lahatsoratra? afa-po? Tsy mahazo alalana? Voanjo ve ianao?
Ny ady hevitra ara-dalàna dia mitohy amin'ny hoe inona no atao hoe fampiasana marina ary koa hoe hatraiza ny fiarovana ny zon'ny mpamorona na orinasa iray raha toa ka mahita tranokala hafa ny atiny. Amin'ny maha olona manoratra atiny iray taonina dia azoko atao aminao ny milaza aminao fa tsy mety izany. Tsy nilaza aho fa tsy ara-dalàna… Nilaza aho fa ratsy.
mampino, Tynt manome ahy statistika fa ny atiny dia adika maherin'ny 100 isan'andro ataon'ny mpitsidika. In-100 isan'andro !!! Nozaraina matetika tamin'ny alàlan'ny mailaka io atiny io… fa ny sasany kosa mampiditra izany amin'ny tranokalan'olon-kafa. Ny sasany amin'ny atiny dia santionany amin'ny kaody - mety hahatonga azy io ho tetikasa tranonkala.
Moa ve aho mandefa indray ny atiny? Eny… fa mahazo alalana foana na amin'ny fanarahana ny politikan'ny tranonkala namorona ny atiny. Azafady mba jereo fa tsy nilaza aho Attribution. Ny fanipazana ny rohy mankao anaty atiny izay naorinao dia tsy fahazoan-dàlana… tsy maintsy omena anao mazava tsara ny fahazoan-dàlana. Matetika aho manana orinasan-teknolojia marketing mampiorina ahy eo amin'ny lampihariny na rindrambaiko… fa tsy manao ny asa sarotra amin'ny fanoratana famerenana feno, matetika aho no mangataka amin-dry zareo ny fanasongadinana tian'izy ireo ampidirina ao anaty paositra. Izy ireo dia manome azy ireo… alàlana maneho hevitra hamoaka azy ireo.
Ankoatra ny zon'ny mpamorona, dia matetika aho no diso amin'ny fampiasana Creative Commons. Vahoaka mpamorona mamaritra mazava tsara raha ny asan'ny tranokala na tsia dia azo adika amin'ny fanondroana fotsiny, tsy misy fanamelohana, na raha mila alalana fanampiny.
Amin'ny vanim-potoana iray izay ahatonga ny orinasa tsirairay ho mpanonta atiny, matanjaka ny fakampanahy handika sy hametaka lahatsoratra miaraka amin'ny atin'ny olon-kafa. Fihetsika mampidi-doza anefa izany, fa vao mainka atahorana kokoa ny andro (manontania fotsiny ireo bilaogera notorian'ireo Rightyaven). Na inona na inona mety na tsia ny fitoriana… dia mitaky fotoana be sy lafo ny fampidirana ny vatanao ho any amin'ny fitsarana ary ny fangatahana mpisolovava hiaro anao.
Sorohy izany amin'ny fanoratana ny atiny anao manokana. Tsy ny zavatra azo antoka ihany no hatao, fa ny zavatra tsara tokony hatao koa. Nanambola fotoana sy ezaka be dia be izahay hampivoarana ny tranonkalantsika (toy ny orinasa maro). Ny fisandratana ny atiny dia aseho amin'ny tranokala hafa… manintona ny sain'ny olona ary indraindray aza ny vola miditra… dia tsotra fotsiny.
Image: Sary solaitrabe Bart Simpson - Sary
Maso mainty an'ny Google Panda
9 Jun 2011 amin'ny 4:45 AM
Zoky tena marina ianao amin'ny lafiny ara-dalàna rehetra vs diso. Tsy mety izany ary tsy ara-dalàna ny sisin-tany amin'ny tranga sasany. Namaky toerana vitsivitsy aho fa 10 ka hatramin'ny 20% dia mety amin'ny rohy credit +, ary miankina amin'ny toe-javatra rehetra ihany koa izany. Ny fanesoana, ny "collage" ary ny karazan-javatra hafa dia somary malemy kokoa ihany.
Nefa tsy maintsy lazaiko fa ny fahazoan-dàlana dia ilaina ihany raha "mamerina mamerina" ny zavatra iray manontolo na ampahany betsaka amin'izany ianao.
Ohatra, raha manoratra lahatsoratra amin'ny media sosialy aho ary te-hiteny anao, Douglas Karr ary ny lahatsoratro dia teny 600 - 1200 ho an'ny exmple… ary te hampiasa teny notsongaina avy amin'ny iray amin'ireo hafatrao aho, hampiasa teny nindramina ary hanome fanamarihana nefa tsy mangataka alalana.
Rehefa dinihina tokoa, nandefa azy io tamin'ny Internet ianao ary noho izany dia "olo-bahoaka" ianao izao ary raha mila mangataka alalana amin'ny olona lazaiko aho, dia lasa tsy azo atao mihitsy ny mandefa zavatra - mandany andro, herinandro maromaro ny olona sasany na tsy hamaly mihitsy. Fa mariho ny ampahany momba ny isan'ny teny… Ny fehezanteny iray dia fehezanteny 1… 2 max ka fehezanteny 1 fotsiny angamba ao anatin'ny fehezanteny 100 - 200.
ary… tsy mpisolovava aho na inona na inona koa, mazava ho azy, tena ny hevitro manokana.
9 Jun 2011 amin'ny 10:12 AM
Tsy mety koa ny manao mashup an'ny OPC (atin'ny olon-kafa). Ny fananana ara-tsaina na ilay hevitra arovana. Tsy ny teny ihany. Tsia…
Jun 9, 2011 ao amin'ny 2: 29 PM
Manaiky aho. Indrindra rehefa tranokala mashup, na lahatsoratra no mashup.
Jun 12, 2011 ao amin'ny 10: 32 PM
Ahoana ny fahitanao ny sombintsombiny? Matetika aho no misintona fehintsoratra iray avy amin'ny bilaogy iray izay hitako fa mahaliana na manome aingam-panahy ho toy ny fototry ny lahatsoratra vaovao. Ampiarahiko hatrany ny rohy miverina sy ny trosa.
Jun 13, 2011 ao amin'ny 7: 16 PM
Tsy ny fahatsapako azy ireo, Lorraine… fa ny fihetseham-pon'ny tompon'ny tranokala. Ny sombintsombiny dia mbola maka tahaka ny atiny - tsy maninona na kely aza ny fitaovana. Nilaza ireo mpanohana fa ny sombintsombiny iray dia 'fampiasana ara-drariny' raha manao zavatra toy ny fanabeazana ny hafa ianao. Na izany aza, isika izay manana bilaogy manangana ny marika sy ny orinasantsika dia mahazo tombony amin'ireo sombintsombiny ireo. Na dia tsy mivantana aza izany dia mety ho hitory ianao.
Jun 13, 2011 ao amin'ny 8: 14 PM
Heveriko fa ny sombintsombiny iray dia fampiasana ara-drariny foana. Ny olana dia ny fanararaotam-pahefana amin'ny fomba ratsy sy ny fanararaotana ataon'ny olona amin'ny ankapobeny. Ny fanontaniana hoe inona ny sombintsombiny iray ary ny fomba famaritantsika azy no tena zava-dehibe eto.
Ny fampiasana marina dia voafaritra mazava ary mila mamaky fotsiny izay lazain'ny fampiasana marina ianao. Tena hazavaina tsara eto: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Misy fomba ara-teknika ahafahan'ny tompona tranokala manome sombiny, ary raha misy mpanoratra manome izany amin'ny alàlan'ny feed-ny, ohatra, dia takatra fa io * ny sombintsombiny * tsy anjarantsika bilaogera no “misafidy sy misafidy” andalana inona no tianay hampiasaina ho toy ny sombiny.
Raha tsy voafaritra ny sombintsombiny iray, dia heveriko fa tsy maninona ny fampiasana teny nalaina avy tao amin'ilay lahatsoratra mba hanomezana ny sahan-kevitry ny soratanao ary hanome rohy. Hamarino fotsiny fa ny lahatsoratrao dia tany am-boalohany ary ny teny nalaina / sombiny dia tsy misy afa-tsy mba hanisy teboka na hanonona olona iray. Tokony ho ampahany kely amin'ilay lahatsoratra izy io ka tsy tena manodikodina ny soratra na mametaka teny fotsiny, fa tokony hianjera amin'ny famoahana lahatsoratra, fanakianana, fanesoesoana sy ny tiana.
Miverina hatrany amin'ny habetsaky ny teny ampiasaina amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany ary ohatrinona ny zavatra soratanao no tena manome lanja ny resaka na lohahevitra? Sa kosa mamerina mandika izay notenenin'ny olon-kafa fotsiny ianao ary miorina amin'ny an'io lahatsoratra io fotsiny ve ny lahatsoratrao? raha tsy manome lanja ianao dia manontany tena aho hoe inona no ataonao. Raha any an-kafa ianao, manonona olona iray na ny lahatsoratr'izy ireo hanohanana ny hevitrao ohatra dia mitadiava izany. Tsy hitondra afa-tsy fampahafantarana bebe kokoa ny lahatsoratra tany am-boalohany izany ary raha ilay bilaogera resahina ao dia ao no hahazoam-bola amin'ny asa sorany, dia hanampy fotsiny izany.
Jun 13, 2011 ao amin'ny 8: 28 PM
Manohitra ny hevitrao ianao ry Oscar… ary manohana ny ahy. Ny lakilen'ny olana dia ny TSY MISY fepetra takiana manokana izay manaporofo na manohitra izay atao hoe "fampiasana marina". Ny isan'ny teny dia tsy misy ifandraisany (Jereo: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Raha enjehina ianao… handeha hiatrika fitsarana ianao ary eo no tapaka. Amin'izay fotoana izay, ny vinavinako dia efa nandany fotoana be ianao ary mety vola. Izany no teniko fampitandremana - tokony hitandrina ny bilaogera.
Jun 15, 2011 ao amin'ny 12: 35 PM
Amin'ny maha developer ahy dia matetika loatra no fahitako an'ity amin'ny bilaogin'ny mpamorona. Hesorin'ny mpamorona kaody amin'ny tranokala toy ny Microsoft Developer Network (MSDN), ampidiro ao amin'ny toerany izy ireo, tsy manome andinin-teny momba ny toerana niavian'ny loharano ary avy eo maneho hevitra momba ilay kaody toa azy ireo manokana. Na dia tsy milaza mazava aza izy ireo fa asa tany am-boalohany dia tsy nitanisa ny asa ihany koa izy ireo. Izany dia mamela anao hanana ny fiheverana fa asa tany am-boalohany izy ireo ary manam-pahefana amin'izany.
Ireo atiny rehetra ireo dia tena niverina tamin'ny zavatra nianarantsika rehetra, na tokony ho nianarantsika, tany amin'ny lisea momba ny fitanisana ny asa hafa sy ny plagiarism. Na dia toa tsy mampaninona ny maro aza izany, dia tsy mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondrantena izany. Na dia mahazo fahazoan-dàlana handefa indray ny atiny aza ny afisy, dia mbola manana adidy mitanisa ny loharano niavian'izy ireo.
29 Aogositra 2011 amin'ny 7:45 PM
Vakio miaraka amin'ny fahalianana be ny lahatsoratrao, heveriko fa ny ankamaroantsika dia meloka amin'ny fandefasana / famoahana atiny manana zon'ny mpamorona manana alalana avy amin'ny tompona.
BTW, manontany tena fotsiny hoe, nahazo alalana handefa ny sarin'i Bart Simpson ve ianao?
29 Aogositra 2011 amin'ny 9:23 PM
Eny, ho hitanao ny fanondroana ny sary eo amin'ny footer - nahazoana alàlana raha mbola nisy referansa tao amin'ilay lahatsoratra niverina tany amin'ny tranonkalany. 🙂
31 Okt 2011 amin'ny 8:09 PM
Fanavaozam-baovao iray momba an'io - hita fa mety tsy ho ao anaty orinasa intsony Rrontaven atsy ho atsy. Misaotra azy ireo ny asa ratsy fanaovan-gazety sy ny tsy fahombiazan'ny fitsarana!
Oct 31, 2013 amin'ny 4: 57 AM
Te hahafantatra aho, raha ny atiny dia nalaina avy amin'ny bilaogy hafa tao amin'ny tranokala iray. . . ary tezitra ilay bilaogera avy eo, nangataka ny hanesorana ny atiny. . . esorina eo no ho eo ny atiny ARY fandefasana ny fialantsiny. . . Manan-jo hametraka fiampangana ve ilay bilaogera?
Misaotra anao ary manantena ny hiverina any aminao aho
Oct 31, 2013 amin'ny 9: 35 AM
Eny, Kelsey. Ny mangalatra atiny dia mangalatra, ny miala tsiny rehefa tratra ianao dia tsy mampiova ny zava-misy. Izany dia nilaza - Tsy mbola nanenjika olona ara-dalàna mihitsy aho taorian'ny nanesoran'izy ireo izany.